यस्ता काम गरे आँखाको शक्ती बढाउन सकिन्छ, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
आँखाको शक्ती बढाउनको लागि हरियो सागपात र फलफूल खानु राम्रो हुन्छ । तर यदि आँखा कमजोर हुँदै गएका छन् भने खाना संगै आँखाको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ।आँखाको शक्ति बढाउने अभ्यास गर्नको लागि मैनबत्ती तरिका सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । यसको लागि मनिबत्ति बालेर त्यसलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ ।
त्यसपछि आफू डेढ देखि दुई फिटको दुरीमा बस्नुपर्छ । मैनबत्तिलाई आफ्ना सिधा आँखाले मैनबत्तिकै आगोमा केन्द्रित भएर आँखा नझिम्काई हेर्नुपर्छ। यसरि हेर्दा आँखाबाट आँशु नझरुञ्जेल एकटकले हेर्नुपर्छ । यो अभ्यास हरेक दिन दुई देखि तीन पटक सम्म गर्नाले आँखाको शक्ती बढ्छ।
आँखाको लागि अर्को राम्रो अभ्यास भनेको पेन्सिल अभ्यास पनि हो । पेन्सिल आफ्नो हातमा लिनुहोस् र आँखा देखि केहि पर राख्नुहोस्। त्यसको टुप्पोमा एकटकले हेर्नुहोस् । त्यसपछि पेन्सिललाई आँखाको नजिक नजिक ल्याउँदै जानुहोस् र धमिलो देखुन्जेल सम्म नजिक ल्याउनुहोस् । यो अभ्यासले तपाईंको आँखालाई तेज बनाउनुका साथै दिमागको एकाग्रता शक्तिलाई पनि बढाइदिन्छ।
परको वस्तु हेर्ने शक्तिको लागि आफ्नो औंला प्रयोग गरेर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । यसको लागि आफ्नो हातको एउटा औंला आँखा देखि सिधा, राख्नुहोस् । अब केही परको कुनै वस्तु हेर्नुहोस् । त्यसपछि फेरी आफ्नो औंला हेर्नुहोस् । छिटो-छिटो आफ्नो हातको औंला र परको वस्तु हेर्ने अभ्यास हेर्ने गरिराख्नुहोस् । यसले परको वस्तु हेर्ने तपाईंको शक्ति बढ्छ भने दिमाग पनि तीक्ष्ण बन्छ।
आँखा किन सुख्खा हुन्छ ? उपचार के छ ?
कम्प्युटर, ल्यापटप, मोवाइलको स्किनमा धेरै समय हेरिन्छ । यसको सोझो प्रभाव आँखामा पर्छ । यस्ता आधुनिक उपकरणको बढ्दो प्रयोगले आँखाको ज्योति नष्ट गरिरहेको छ । वायु प्रदूषणले पनि आँखामा क्षति पुर्‍याउँछ ।
यावत् कारणले धेरैको आँखा कमजोर हुँदैछ । खासगरी आँखा सुख्खा हुने समस्या आम रुपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । यसरी आँखा सुख्खा हुनुलाई ‘ड्राई आई सिन्ड्रोम’ भनिन्छ । आँखा सुख्खा भएमा आँखाबाट आशुको उत्पादन कम हुने तथा आँखाबाट आशु बग्न कम हुने गर्दछ ।
-आँखा सुख्खा हुनु
-आँखामा खुजली हुनु, चिलाउनु
-आँखामा केही विझेको महसुस हुनु
-बिना कारण आँखाबाट पानी निस्कनु
-बिना कारण आँखामा थकान वा सूजन महसुस हुनु
आँखा सानो हुनु
किन हुन्छ सुख्खा ?
आयु ५० वर्ष भन्दा माथि हुनु
उमेर बढेसँगै आँखाको समस्या पनि बढ्ने गर्छ । बढ्दो उमेरकै कारण आसुको उत्पादनमा समेत कमी आउने गर्छ । विशेषगरी , ५० वर्ष माथि आयु भएका मानिसहरुको आँखाबाट आशुको उत्पादन कम हुने गर्छ । जसका कारण आँखा सुख्खा हुने गर्छ ।
महिलाहरुमा महिनावारी रोकिएसँगै आँखा सम्बन्धि विभिन्न समस्या देखा पर्ने गर्दछ । जसमध्ये आँखा सुख्खा हुने समस्या पनि एक हो । महिनावारी सुकेपश्चात्त महिलाहरुमा आउने हर्मोनल गडबडीका कारण पनि यस्तो समस्या देखिने गर्छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थाइराइड ,भिटामिन ‘ए’को कमी लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्याका कारण पनि आँखा सुख्खा हुने गर्छ ।
लेजर विधिका कारण
रिफरेक्टिभ आई सर्जरी लगायतका लेजर प्रविधिद्धारा आँखामा गरिने शल्यकि्रयाका कारण पनि आँखा सुख्खा हुने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । तर यस्ता प्रविधिका कारण आँखा सुख्खा हुने समस्या भने अस्थायी हुने गर्छ ।
आशु ग्रन्थीमा क्षति भएमा
सुजन तथा विकिरणका आसु नलीमा पुगेको क्षतिका कारण पनि आखा सुख्खा हुने गर्छ । जसले गर्दा उक्त नलीबाट आशु स्वत कम बग्ने गर्छ ।
परेला सम्बन्धि समस्या
लगातार आँखा झिम्क्याउने गर्नाले आँखाको सतहमा आसुको पातलो सतह बन्ने गर्दछ । तर यदी आँखा झिम्क्याउँदा वा परेला झिम्क्याउदा कुनै समस्या भएको खण्डमा आसु फैलिएर उक्त सतहमा आसुको पातलो सतह बनाउन सक्दैन ।जसका कारण आँखा सुख्खा हुने गर्दछ ।
लामो समयसम्म किताब पढेमा
कम्प्यूटरमा लामो समयसम्म बसेमा
आँखा नझिम्काई लामेा समयमा एक नाशले हेरमा
यी औषधीका कारण पनि हुनसक्छ आखा सुख्खा
-उच्च रक्तचापमा प्रयोग हुने औषधी
-एन्टीथिस्टमाइंस तथा डोगेस्टंट्स
-हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी
-पिम्पल्सको लागि प्रयोग गरिने औषधी
आँखामा कुनै समस्या होस् वा नहोस् चिकित्सकहरु समय समयमा आँखा जाच गर्न सुझाव दिने गर्दछन् । त्यस्तै, टिबी हेर्दा होस् वा कम्प्यूटर चलाउदा केही समय आखाालाई आराम दिने गर्नाले पनि आखा सुख्खा हुन पाउँदैन । यस्तै, कामको बीच बीचमा परेला झिमझिम गरेमा वा आखा झिम्क्याउनाले पनि आँखा सुख्खा हुने समस्याबाट आँखालाई बचाउँन सकिन्छ ।
यसकाे बारेमा पनि जान्रुहाेस्ः
हामीले आफ्ना बालबालिकाको आँखाको दृष्टि ठीक छ की छैन भनेर समय समयमा जाँच गराई रहनु पर्छ। आफ्ना नानीहरुलाई स्कुल पठाउनु अगाडि उनीहरुको आँखाको जाँच गर्नु अनिवार्य हुन्छ। समयमा नै आँखाको समस्या थाहा पाएमा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ।
स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरुको आँखा कमजोरी शिक्षकहरुद्वारा थाहा पाउन सकिन्छ। अल्छी आँखा र कमजोर दृष्टि भएका बालबालिकाको समयमा उपचार भएन भने भविष्य नै अन्धकार हुन सक्छ। बालबालिकाको आँखामा देखिने प्रमुख समस्या मध्य अल्छी आँखा पनि एक हो।
दृष्टिको क्षमता कम हुन्छ। त्यसैले पढ्ने बेला किताबलाई आँखाको नजिक लाने, टेलिभिजन नजिक गएर हेर्ने अथवा आँखा चिम्सो पारेर हेर्ने गर्दछ। कुनै बच्चाहरुमा आँखा डेढो पनि हुने गर्दछ।
समयमा नै दृष्टिको उचित उपचार नहुनु, आँखाको सही पावर अनुसारको चश्मा प्रयोग नगर्नु, चोट लागेको आँखाको समयमा नै उपचार नहुनु र डेढोपनको समयमा पहिचान नहुनु बाहेक जन्मजात मोतिविन्दुको उपचारमा ढिलाई भएमा बच्चाहरुको आँखामा अम्बलायोपिया अथवा अल्छी आँखा हुन सक्छ।
अल्छी आँखा अनुमानित जनसंख्याको १ देखि ५ प्रतिशतमा देखा पर्दछ। नेपाल आँखा अस्पतालको बाल आँखा विभागमा प्रत्येक दिन १५ – २० जना बालबालिकाहरु अल्छी आँखाको उपचार गर्न आउने गर्दछन्।विशेष गरेर बच्चाहरुको दृष्टि पूर्ण रुपमा ८ वर्ष भित्र विकास हुने भएको हुनाले यदि उपचार ८ वर्ष अघि गरेमा राम्रो नतिजा प्राप्त हुन्छ।
उपचारका रुपमा चश्मा नियमित प्रयोग गर्ने, साथसाथै प्याच थेरापी पनि डाक्टरको सल्लाह बमोजिम प्रयोग गरेमा अल्छी आँखाको सुधार हुन सक्छ। प्याचिङ्ग थेरापी एक प्रभावकारी उपचार हो।
डाक्टरको साथसाथै अविभावकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किन भने अविभावकले प्याचिङ्ग लगाउने तरिका र समय राम्रो सँग बुझेर प्रयोग गरेमा बच्चाको आँखाको रोशनी सदाको लागि कम हुन बाट बचाउन सकिन्छ।
Don't Miss it याद गर्नुहाेस् ! मुटु रोगको यस्ताे खतरनाक लक्षण देखिए तुरुन्तै ज्यान जान सक्छ
रोक्छ स्ट्रोक अमिलो फलफूलले
वैज्ञानिकहरूका अनुसार, जुन व्यक्तिको रगतमा भिटामिन सी को मात्रा कम थियो उसमा उच्च रक्तचाप वा मोटो मानिसमा स्ट्रोक हुने सम्भावना…